Myanmar’s Foreign Trade Hits $6.1 Billion in Two Months | Myanmar Business Today
Home Business Local Myanmar’s Foreign Trade Hits $6.1 Billion in Two Months
A truck passes nearacontainer yard ataport in Yangon April 18, 2013. The European Union is expected to lift all sanctions on Myanmar next week, except for an arms embargo, in recognition of the "remarkable process of reform" in the country,adocument seen by Reuters showed on Wednesday. The step, which was agreed by EU ambassadors on Wednesday, paving the way for ministerial approval on Monday, will allow European companies to invest in Myanmar, which has significant natural resources and borders economic giants China and India. REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR - Tags: POLITICS BUSINESS) - GM1E94I1M6201
In the first two months of fiscal 2020, Myanmar’s foreign trade reached $6.1 billion, with exports of $3.1 billion and imports of $3 billion, an increase of over $921 million from the same periodayear earlier, according to data from the Ministry of Commerce.
Agricultural exports brought in $553.1 million while fishery exports generated $175.3 million; mineral commodity exports, $629.9 million; manufacturing products, $1.6 billion; animal products, $41.5 million; and other exports, $54.6 million.
The country imported $1 billion worth of investment materials, $1 billion worth of industrial-use products, $559.9 million worth of consumer products and $397.9 million of raw materials for garment (CMP) industries.
Myanmar setaforeign trade target of $33 billion for the 2020 fiscal year, with $15.5 billion in exports and $17.5 billion in imports.
Based on this target, the country will havea$2 billion trade deficit this fiscal year.
နှစ်လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော်ဖိုးကုန်သွယ်ထား
၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အစ နှစ်လအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ ကုန်သွယ်ထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်မှုစာရင်းများအရ သိရသည်။
ဘဏ္ဍာနှစ်အစ နှစ်လအတွင်းတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်တင်သွင်းထားကြောင်း ကုန်သွယ်မှုစာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကာလတူကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂၁ သန်းကျော် ပိုမိုရရှိထားပြီး နှစ်လအတွင်းတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လယ်ယာထွက်ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၄ ဒသမ ၁ သန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၅ ဒသမ ၃ သန်း ၊ သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂၉ ဒသမ ၉ သန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံကျော်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁ ဒသမ ၅ သန်းနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄ ဒသမ ၆ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
နှစ်လအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၉ ဒသမ ၉ သန်းကျော်နှင့် အထည်ချုပ်အတွက် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှု (CMP) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၇ ဒသမ ၉ သန်းကျော်ပြန်လည် တင်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယခု ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံအထိ ကုန်သွယ်ရန်လျာထားပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်ခုလုံးတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အမေရိန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့် ပို့ကုန်များတင်ပို့ရန်လျာထားသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့် သွင်းကုန်များပြန်လည်တင်သွိင်းရန် လျာထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အရ သိရသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏဖြစ်သည့် ပို့ကုန်လျာထားချက်နှင့် သွင်းကုန်လျာထားချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ၂ ဘီလီယံရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Previous articleCBM Suspends Acceptance of Mobile Payments from ‘Zero-Budget’ Tourists
Next articleK94.76 million Earmarked for Train Accident Reduction